OoVimba bezemali abanatyisiweyo-Funda ukuRhweba
tag: Imali eyabelwe imali
Zithini izibonelelo ze-inshurensi yeDeFi?
Ngaphandle kokukhula okumandla kukaDeffi, iseyindlela ethile ebonakalayo kwintengiso yezemali. Ngokunjalo, i-inshurensi ye-Defi ibonakala isasetyenziswa ngokubanzi kuyo yonke i-crypto-asethi kunye nokubanjwa. Nangona kunjalo, kuyinyani ukuba nangona amaqonga e-Defi ethe chu ngokwandisa impembelelo kunye nokuthembela kwabo phakathi kwabatyali-mali, i-inshurensi ihlala iyimfuneko kwimeko yomngcipheko kunye nobuqhetseba.
Okwangoku, ngaphandle kwe-2-trillion-dollar yexabiso lemarike yemali yedijithali, kukho kuphela i-150 yezigidigidi zeedola eDeffi (ezabelwe imali). Ingxaki kukuba ngaphezulu kweepesenti ezingama-98 zexabiso lilonke elitshixiweyo (okanye i-TVL) eDeffi khange iqinisekiswe ngaphandle kwesidingo sayo.
Kwicandelo lezemali elikhawulezayo kodwa elinobungozi njenge-Defi, oku kunokuba sisisongelo kubaphathi be-Defi xa kungekho khuselo lwee-asethi zabo kwii-smart contract hacks, ukuxhaphaza kunye nokungasebenzi.
Yintoni i-inshurensi ye-DeFi?
I-inshurensi mayingabi yinto entsha kuthi. Ngokubhekisele kwi-DeFi, i-inshurensi idlala indima yokukhusela ilahleko edla ngokwenzeka kwiziteyki nakwiasethi eDeffi. Imisebenzi yayo isekwe ekulinganiseni iingozi kunye nasekuhlawuleni amabango avela kubathathi-nxaxheba beDeFi.
Njengoko sonke sisazi, ngokubanzi, ezemali alililo icandelo elikhuselekileyo, singasathethi ke ngeDeFi. Ngaphakathi kwe-Defi, kukho oonobangela bokungalungiswa kakuhle kwesivumelwano, ii-cyber hacks, ubuqhetseba phakathi kwamalungu oluntu, kunye neemeko ezininzi ezingafunekiyo ezinokwenzeka. Okwangoku, kubonakala ngathi ukungabikho kwe-inshurensi yokusetyenziswa kwe-inshurensi kuyinyani ngelixa iipesenti ezi-2 ze-TVL iqinisekisiwe. Le nyaniso inokuba yingozi kunokuba uninzi lwethu lucinga kuba isiganeko esixhaphakileyo sokuphembelela ilahleko sinokubangela ukonakala kuyo yonke i-DeFi ecosystem.
I-inshurensi yolawulo olugunyazisiweyo ixhomekeke kwizivumelwano ezifanelekileyo ukuseta imigaqo eyahlukeneyo kunye nezibonelelo ezichonga iimeko apho iqela liya kukhululeka kumonakalo wemali kunye nelahleko ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile. Ukulimala kwemali kunokubangelwa kukungafaniyo koonobangela njengokuxhaphaza kwesivumelwano sekhontrakthi, iminyhadala ye-swan emnyama, ii-hacks zolwazi, ubuqhetseba, njalo njalo.
Indlela esebenza ngayo i-inshurensi eyabelwe amagunya ifuna iingozi ezithile ezinokuthi zifakwe ikhowudi kwizivumelwano ezifanelekileyo ezisekwe kwiqonga leBlockchain. Nje ukuba iiprothokholi zekhontrakthi ezi-smart zenziwe ukusombulula iingxaki ezinokubakho zemali, azinakuguqulwa. Oku kulunge kakhulu kulungelelwaniso lwenjongo kumabango einshurensi.
Ngamafutshane, iikhontrakthi ezikrelekrele ziqulethe iziqwenga zekhowudi ezifihla imigaqo yomgaqo-nkqubo, kwaye ngokuzenzekelayo, xa kusenzeka naziphi na iintlekele ezibhekise kwizipaji zedijithali, ikhuselo lomonakalo liya kuchazwa ngokwezi protocols zesivumelwano. Baya kuthatha uxanduva lokuthatha isigqibo malunga neemeko, kwaye ukuba ilahleko zingaphakathi kwemida yomgaqo-nkqubo, i-inshurensi iyakuhlawula ukonakaliswa kwemali.
Esona sibonelelo sibalaseleyo sinokufumana kuso I-inshurensi yolawuloEwe kunjalo, lukhuseleko olunikezela ngokuchasene nelahleko engalindelekanga evela kwizisongelo zentengiso kunye nolwaphulo-mthetho lwedijithali. Ukucacisa koku, apha ngezantsi zizizathu ezithile eziza kukholisa nabani na ukuba olu hlobo lweinshurensi luyimfuneko ngokupheleleyo ukuba uthatha inxaxheba kwimarike yeDeFi.
Ukusebenza elubala nokungaguquki
I-inshurensi ye-Defi isebenza ngesiseko seekhontrakthi ezi-smart kunye neeprotokholi ezilungiselelwe ukuba zihlolisise iimeko zamatyala okubanga i-inshurensi kwaye zenze izigqibo ngokuzenzekelayo. Le migaqo yekhontrakthi ehlakaniphile iya kuqinisekisa ukuba izigqubuthelo ziya kubonelelwa okanye hayi ngendlela eyiyo ngokupheleleyo emva kokuvavanya ukuba zonke iimeko eziyimfuneko ziyafezekiswa ukuba semthethweni kwembuyekezo yeinshurensi.
Ngaphaya koko, nje ukuba iimeko zibekiwe, azinakuguqulwa, kwaye naziphi na iinzame zokusebenzisa ii-apreyizali zezivumelwano ze-inshurensi ezikrelekrele ze-inshurensi ziya kuba lilize.
Inkqubo yembuyekezo ekhawulezileyo
Inkqubo yokuhlawula i-inshurensi ye-Defi inesandla esiphezulu kwi-inshurensi yesiko ngenxa yesivumelwano se-smart automation. Izigqibo malunga nokunyaniseka kwebango le-inshurensi kunye nokuqinisekiswa kokuhlawulelwa kusekwe kwii-algorithms. Ke, ukugqitywa kwetyala kuya kukhawuleza kakhulu kwaye kuya kuthintela ukukhetha kunye nokuzithoba.
Ikhusela ngokuchasene hacks kumaqonga otshintshiselwano
Kwelinye icala, iDeffi ithathwa njengekhuselekileyo kuba ayiqulathanga nabaphi na abalamli, kodwa kukho ezinye izinto ekufuneka sizikhathaze ngazo xa sililungu lendalo ye-DeFi. Akukho siqinisekiso sokuba isipaji sakho sedijithali kunye nolwazi lwakho aluyi kuphoswa. Kusafuneka ulumke malunga nabakhohlisi kunye nabaphuli-mthetho abajikeleze imarike yezemali yedijithali. Izinto ezimbi ezinokwenzeka kwimpahla yakho ye-DeFi bubusela okanye uhlaselo kwizipaji zedijithali, ukuxhaphaza kwekhontrakthi ehlakaniphileyo, iinkcukacha zeakhawunti, kunye nokunye.
Ngesi sizathu, udinga izinto ezimbini zokuthintela iingozi ezininzi kangangoko kunokwenzeka: ukukhetha iqonga lotshintshiselwano oluthembekileyo kunye nokukhangela umnikezeli ngeinshurensi ekunene kuzo zonke izoyikiso ezinokubangela ingozi.
Khusela ekulahlekelweni yimvumelwano yekhowudi enekhowudi yeveki nganye
Nokuba iikhontrakthi ezikrelekrele ezixhomekeke kwintengiselwano yakho yeDeFi ziqwalaselwe ngezinto ezikhuselekileyo, njengomntu ochaphazelekayo waseDeFi, ukuhlala kwisilumkiso kungaphezulu kokufunekayo. Nangona kunjalo iTekhnoloji ephezulu namhlanje, kufuneka sivume ukuba ayigqibekanga. Iikhontrakthi zakho ezikrelekrele kusenokwenzeka ukuba bezifihla iindlela ezithile eziya kuba semngciphekweni kubagculeli ukuba kufunyenwe kwaye iindlela zomshuwalense zihlala zifuna ukuthintela iihacks ezingafunekiyo kunye nokuxhaphaza kungenzeki.
I-inshurensi ye-DeFi ibaluleke kakhulu, ithathela ingqalelo yonke imingcipheko esinokuthi sihlangane nayo kwizitaki zethu nakwingxowa-mali kwiDeFi. Nangona kunjalo, ukwenza ngcono izibonelelo zolu hlobo lweinshurensi, abenzi bomgaqo-nkqubo kufuneka bakugcine ukubaluleka kokubaluleka kokuqwalaselwa xa kufikwa kumgaqo-nkqubo. Amanyathelo kwiimpembelelo zemigaqo-nkqubo kufuneka athathwe ngocoselelo, kwaye iindlela zokukhawulezisa ukuhlawulwa kwakhona kwe-inshurensi kunye noviwo kufuneka ziqwalaselwe ngokufanelekileyo. Emva kwayo yonke loo nto, nje ukuba sibeke i-DeFi ye-inshurensi yeekhontrakthi ezikrelekrele, iiprotocol azinakuguqulwa. Ke ngoko, kufuneka silumke nangazo naziphi na iindlela zokumisela.
Kwinqanaba lokusika kwedijithali, ukuvela kwamaqonga e-DeFi kuye kwaba namandla kakhulu. Ngenxa yoko, iDeFi iqikelelwa ukuba inwenwe phakathi kweemarike kungekudala. Kwangelo xesha, zininzi I-inshorensi ye-DeFi Bazibekile iinkonzo zabo ukukhusela abaxhasi beDeFi kuyo yonke imingcipheko enokwenzeka kumgca. Nangona kunjalo, kubalulekile ukumisela umnikezeli weinshurensi onokuthenjwa ukuze agcine iiasethi zakho zikhuselekile ekuguqukeni nasemngciphekweni wentengiso kunye ne-DeFi ecosystem.
tags Imali eyabelwe imali, Defi, I-inshurensi yeDeFi, AbaKhuseli beDeFi